ရုပ်ရှင်လောကထဲ မဝင်ခင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကို မီးသွေး လိုက်ပို့ရတဲ့အထိ ဘဝကိုရုန်းကန်ခဲ့ ရပုံကို ဝမ်းနည်းမျက်ရည်တွေနဲ့ ပြောပြလာတဲ့ ယွန်းရွှေရည် – Let Pan Daily
သရုပ်ဆောင် ယွန်းရွှေရည်ကတော့ လက်ရှိ မှာ အလုပ်သဘောအရ Online ပေါ်ကနေ အချိန်ပိုင်း နဲ့ Live လွှင့်ပြီး ဈေးရောင်းပေးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ယွန်းရွှေရည်ကိုတော့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကနေတဆင့် ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေး ချစ်ခင်မှုကို ရရှိလာတဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။Covid ကာလ မှာတော့ ယွန်းရွှေရည်ဟာ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ ကို ရပ်နားထားခဲ့တာပါ ယွန်းရွှေရည်က ရုပ်ရှင်လောက ထဲမရောက်ခင် မိဘတွေရဲ့ စီးပွားရေးခက်ခဲစဉ်က ရုန်းကန်ခဲ့ရပုံကို ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ယွန်းရွှေရည်က“အဖေက ဝပ်ရှော့လောကမှာ နာမည်ကြီး ဝပ်ရှော့ဆရာတစ်ယောက်ပါ။ တခါတလေ မနက်မိုးလင်းထိ အလုပ်လုပ်နေတဲ့နေ့ရက်တွေတောင်ရှိခဲ့ပါတယ် အရမ်းနာမည်ကြီးခဲ့သလို ပိုက်ဆံလည်းတော်တော်ရှိခဲ့တာပေါ့။အမတွေလက်ထက်က ကားတွေဘာတွေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်း စီးပွားရေး ကျသွားတဲ့အချိန်မှာ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်။အမကိုယ်တိုင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ မီးသွေးတောင်းလိုက်ပို့တဲ့အထိ လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့။မရှက်ပါဘူး။ကိုယ့်မိသားစုအရေးကိုယ်ရှင်းရတာဆိုတော့လေ…အမဆရာကျော်ဇောလင်းဆီမှာ အပ်ပေးရင်းက ဒီလောကထဲရောက်လာခဲ့တာပါ။”
ငယ်ဘဝ ရုပ်ရှင်လောကထဲ မရောက်ခင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ မီးသွေးတောင်း လိုက်ပို့ရတဲ့အထိ ခက်ခဲစွာရုန်းကန်ခဲ့ရပုံကို ဝမ်းနည်းမျက်ရည်တွေနဲ့ ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးယွန်းရွှေရည်က”“ကိုယ့်ကိုပေးထားတဲ့ အနုပညာကြေးနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အနုပညာကို ပြန်လည်ပေးဆပ်မယ်။ကိုယ့်ကိုခေါင်းဆောင် မင်းသမီး အဖြစ်ရိုက်စေချင်တဲ့ ပရိသတ်တွေ ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်…”လို့လည်း ပြောသွားခဲ့တာပါပရိသတ်ကြီးရေဒါကတော့ ပရိသတ်တွေမသိသေးတဲ့ ယွန်းရွှေရည်ရဲ့ ငယ်ဘဝဖြတ်သန်းခဲ့ရပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ အတုယူစရာလေး ဖြစ်တာကြောင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ.
သရုပျဆောငျ ယှနျးရှရေညျကတော့ လကျရှိ မှာ အလုပျသဘောအရ Online ပျေါကနေ အခြိနျပိုငျး နဲ့ Live လှငျ့ပွီး ဈေးရောငျးပေးနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ယှနျးရှရေညျကိုတော့ ဗီဒီယိုဇာတျကားတှကေနတေဆငျ့ ဇာတျပို့ဇာတျရံသရုပျဆောငျတဈယောကျအနနေဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေး ခဈြခငျမှုကို ရရှိလာတဲ့သူ တဈယောကျဖွဈပါတယျ။Covid ကာလ မှာတော့ ယှနျးရှရေညျဟာ အနုပညာလုပျငနျးတှေ ကို ရပျနားထားခဲ့တာပါ ယှနျးရှရေညျက ရုပျရှငျလောက ထဲမရောကျခငျ မိဘတှရေဲ့ စီးပှားရေးခကျခဲစဉျက ရုနျးကနျခဲ့ရပုံကို ပွောပွလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ
ယှနျးရှရေညျက“အဖကေ ဝပျရှော့လောကမှာ နာမညျကွီး ဝပျရှော့ဆရာတဈယောကျပါ။ တခါတလေ မနကျမိုးလငျးထိ အလုပျလုပျနတေဲ့နရေ့ကျတှတေောငျရှိခဲ့ပါတယျ အရမျးနာမညျကွီးခဲ့သလို ပိုကျဆံလညျးတျောတျောရှိခဲ့တာပေါ့။အမတှလေကျထကျက ကားတှဘောတှနေဲ့ အေးအေးဆေးဆေးနနေိုငျခဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျး စီးပှားရေး ကသြှားတဲ့အခြိနျမှာ ဒုက်ခရောကျခဲ့ရတယျ။အမကိုယျတိုငျလကျဖကျရညျဆိုငျတှမှော မီးသှေးတောငျးလိုကျပို့တဲ့အထိ လုပျခဲ့ရတာပေါ့။မရှကျပါဘူး။ကိုယျ့မိသားစုအရေးကိုယျရှငျးရတာဆိုတော့လေ…အမဆရာကြျောဇောလငျးဆီမှာ အပျပေးရငျးက ဒီလောကထဲရောကျလာခဲ့တာပါ။”
ငယျဘဝ ရုပျရှငျလောကထဲ မရောကျခငျ လကျဖကျရညျဆိုငျတှမှော မီးသှေးတောငျး လိုကျပို့ရတဲ့အထိ ခကျခဲစှာရုနျးကနျခဲ့ရပုံကို ဝမျးနညျးမကျြရညျတှနေဲ့ ပွောပွလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဆကျလကျပွီးယှနျးရှရေညျက”“ကိုယျ့ကိုပေးထားတဲ့ အနုပညာကွေးနဲ့ ထိုကျတနျတဲ့ အနုပညာကို ပွနျလညျပေးဆပျမယျ။ကိုယျ့ကိုခေါငျးဆောငျ မငျးသမီး အဖွဈရိုကျစခေငျြတဲ့ ပရိသတျတှေ ကိုလညျးကြေးဇူးတငျတယျ…”လို့လညျး ပွောသှားခဲ့တာပါပရိသတျကွီးရဒေါကတော့ ပရိသတျတှမေသိသေးတဲ့ ယှနျးရှရေညျရဲ့ ငယျဘဝဖွတျသနျးခဲ့ရပုံလေးပဲဖွဈပါတယျနျော။ အတုယူစရာလေး ဖွဈတာကွောငျ့တငျဆကျပေးလိုကျပါရစေ.
မမဆောငျးကို ခဈြရေးဆိုတဲ့ သူတှဆေိုရငျ အကုနျလုံးကို အားနာပွီး လကျခံခငျြ တယျ ဆိုတဲ့ ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျး
လူတိုငျးအပျေါ စာနာ ကူညီတတျတဲ့ စိတျထားလေးကွောငျ့ အားလုံးက လေးစားနရေ တဲ့ ပရဟိတ မငျးသမီးလေး ခိုငျနှငျးဝေ
“မောငျနဲ့ အတူတူအားကစားလုပျခငျြတယျ” ဆိုပွီး အလနျးစားတငျပေးလိုကျတဲ့ နနျးမှစေံ ရဲ့ ဗီဒီယို အသဈ